सुगर देखि नआत्तिनुहोस् यसरी खाना खान जान्नुभयो भने नियन्त्रण हुन्छ- डा.ज्योती भट्टराई - Nepal Insider
Home/स्वास्थ्य/सुगर देखि नआत्तिनुहोस् यसरी खाना खान जान्नुभयो भने नियन्त्रण हुन्छ- डा.ज्योती भट्टराई
यसबाहेक ‘एक्सराइज’ गर्न पनि सिकाइन्छ। मधुमेहका बिरामी औषधि खान झण्झट मान्नुहुन्छ । यो कुराले उहाँहरूलाई सधैँ तनाव दिन्छ। औषधि मात्र खाएर पुग्दैन भन्ने मलाई लाग्छ उहाँ भन्नुहुन्छ, औषधिसँगै खानपानमा ध्यान दिइएन भने मधुमेह मात्र होइन कुनै पनि रोग निको हुन सक्दैन।कुरा बिरामीलाई मानसिक तनाव पनि भइरहेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा मनोपरामर्शको पनि आवश्यकता पर्नसक्छ। सबै कुरा मिलाएर उपचार दिन सके मात्र बिरामीलाई लाभ हुने डा. ज्योतीको बुझाइ छ।पछिल्लो समय उहाँले बिरामीलाई उपचारात्मक खानामार्फत मधुमेह नियन्त्रण गर्न सुरु गर्नुभएको छ ।
यो विधि प्रत्यक्ष रूपमा डाक्टर र पोषणविदको निगरानीमा हुन्छ। उहाँले मोटा बिरामीलाई छानेर कतिपयलाई त औषधि छुटाएर र कतिपयलाई औषधिको मात्रा कम गराएर उपचार शुरु गर्नुभएको छ यसो गर्दा एक सातामै दुई किलोसम्म तौल घटेको उहाँले देख्नुभयो । सुगर पनि नियन्त्रणमा आएको पाइएको छ। हाम्रो उदेस्य सुगर नियन्त्रणमा ल्याएर औषधी खान नपर्ने बनाउने नै हो ।हामीले खाएको खानाका कारण शरीमा बोसो बनेर जमेको हुन्छ। पहिला भए परिश्रम गरेर पग्लिन्थ्यो’, डा. ज्योती भन्नुहुन्छ, ‘तर अहिले धेरैले शारीरिक परिश्रम गर्दैनन्। त्यसकारण शरीरमा बोसो थुप्रिँदै जान्छ पेटको गोलाइ बढ्छ र अनेक समस्या निम्तिन्छ।
ग्याष्ट्रिकका बिरामीले यस्ता कुरामा ध्यान दिनुहोस्
भुटेको मकै खानुहोस्, १० फाइदा लिनुहोस्